Somalia: Alshabaab oo qarax ay ku fuliyen muqdisho ku laayay dad rayid u badan | Berberanews.com
Home WARARKA Somalia: Alshabaab oo qarax ay ku fuliyen muqdisho ku laayay dad rayid...
Muqdisho-(Berberanews)-Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, 8 kalena way dhaawacmeen kadib markii gaadhi lagu soo rarray walxaha qarxa lagu qarxiyay gaadiid taagnaa meel dhawr tallaabo u jirta bar kontorool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada, gaar ahaan isgoyska ceelgaabta.
Dad goobjoog ah ayaa sheegay in dhimashada iyo dhaawaca ka sakoow uu jiro burbur xoog leh oo gaadhay gaadiid goobta taagnaa iyo kuwo marayay. Gadiidka gurmadka degdeg ah ayaa dadkii dhaawaca ahaa goobta ka qaaday, halka dab demiskuna u gurmadeen oo bakhtiiyeen dab qabsaday gaadiidkii goobta marayay.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda qaraxa, waxayna intaa ku dareen badhtilmaameedku ahaa masuuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Dawladda Federaalka, balse kooxdu ma aanay sheegin tirada dadka ay dileen ama dhaawaceen.
Sidoo kale, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeey geerida dadkii ku dhintay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
“Madaxweynaha ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay isku duubni, wadajir iyo sii joogteynta la shaqeynta laamaha ammaanka,” ayaa lagu yidhi qoraal lagu shaaciyay bogga Villa Somalia.
Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyadda qaraxa, waxayna intaa ku dartay in badhtilmaameedku ahaa masuuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Dawladda Federaalka, balse kooxdu ma aanay sheegin tirada dadka ay dileen ama dhaawaceen.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo ka qaybgalay Aaska Marxuum Arabay
Next articleSomaliland: bishii u danbaysay 1000 qof baa laga helay Covid-19